OED COVID-19 | Su'aalaha Shahaadada ee PUA
Su'aalaha Shahaadada ee PUA
Waaxda Shaqada ee Maraykanka (USDOL) ayaa dhawaan ka soo saartay isbeddello sharci barnaamijka Caawinaada Shaqo La'aanta Safmarka (PUA) kaasoo ballaarinaya sababaha qofku ugu qalmi karo dheefaha. USDOL waxay inooga baahan tahay inaan weydiino su'aalaha cusub ee ku jira dalabka bilowga ee PUA iyo wixii ku saabsan shahaadooyinkaaga todobaadlaha ah ee PUA si aan u siin karno waxtar badan dad badan.
Tilmaanta hoose waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u fahamto sida looga jawaabo su'aalaha cusub. Waxaa laga yaaba inaad isweydiinayso sababtaan ugu caddayn weynay su’aalaha halka hore? Sababta ayaa ah in USDOL aysan noo oggolaan doonin inaan wax ka beddelno luqadda ku qoran codsiga PUA.
Haddii aad xaraynaysid dalabkaaga bilowga, raadi lambarrada ku calaamadaysan “IC”. Haddii aad xaraynaysid shahaadadaada toddobaadlaha ah, raadi “WC.”
Su’aasha IC ee #19 iyo su’aasha WC ee #26
Waa la ii diiday sii wadida dheefaha shaqo la'aanta sababtoo ah waxaan diiday inaan ku laabto shaqada ama aan aqbalo dalab goobta shaqada ah taas oo, labada xaaladoodba, aan waafaqsanayn heerarka badqabka iyo caafimaadka ee deegaanka, gobolka, ama qaranka ee sida tooska ah ula xiriira COVID-19. Tan waxaa ka mid ah laakiin aan ku xaddidnayn, kuwa la xiriira xirashada maaskarada wejiga, tallaabooyinka kala-fogaanshaha, ama bixinta qalabka ilaalinta shakhsiyeed oo waafaqsan tilmaamaha caafimaadka dadweynaha.
Waakan waxay taasi ka dhigan tahay: Su'aashan waxay ku weydiinaysaa haddii aad shaqada u diidday maaddaama aadan rumaysnayn in goobta shaqadaadu ammaan tahay ama in loo-shaqeeyahaagu aanu raacin ama fulinaynin xannibaadaha COVID-19, sida xirashada maaskaro.
Su’aasha IC ee #20 iyo su’aasha WC ee #27
Waxaan siiyaa adeegyo machad waxbarasho ama wakaaladda adeegga waxbarashada waxaanan ahay shaqo la'aan ama qayb ahaan shaqo la'aan sababtoo ah isbeddel ku yimid jadwalka shaqada oo ay si toos ah u keentay xaaladda degdegga ah ee caafimaadka bulshada ee COVID-19. Tan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, isbeddellada jadwalka iyo xirnaanshaha qayb ahaan.
Waakan waxay taasi ka dhigan tahay: Su'aashan waxay ku weydiineysaa haddii aad siisay adeegyo umachad waxbarasho, sida waxbarid ama wadista baska dugsiga, xitaa haddii aadan toos uga shaqeyn dugsiga ama hay'adda waxbarashada. Shuruudahaan uqalmitaanku waxay gaar u yihiin 'isbedelka jadwalkaaga shaqada,' taas oo micnaheedu yahay jadwalkaaga lama saadaalin karin sababtoo ah COVID-19. Natiijadu waxay noqotay inaadan shaqayn usbuucaas ama saacadahaaga waa la jaray.
Su’aasha IC ee #21 iyo su’aasha WC ee #28
waxaan ahay shaqaale saacaddahaygiina way yaraadeen ama waxaa layga joojiyay shaqada natiijada tooska ah ee xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19.
Waa tan sharraxaaddu: Su'aashan waxay ku weydiinaysaa haddii saacadahaagu yaraadeen ama gebi ahaanba la tirtiray sababtoo ah COVID-19. Shuruudihii hore ayaa kaliya oggolaaday dheefaha PUA haddii saacadahaaga gebi ahaanba la tirtiray.
Su’aasha IC #22 iyo su’aasha WC ee #29
Midkoodna ima khuseeyo kuwa kor ku xusan.
Waa tan sharraxaaddu: Su'aashani waxay xaqiijineysaa inaadan haysan sababaha COVID-19 ee codsashada PUA. Haddii aad kaga jawaabtay Haa mid ka mid ah su'aalaha kor ku xusan, marka kaga jawaab Maya su'aashan.